Ethiopia: Baarlamaanka Oo Kala Diray Maamulka Gobolka Tigray-ga﻿ | Hayaan News
Ethiopia: Baarlamaanka Oo Kala Diray Maamulka Gobolka Tigray-ga﻿
Ethiopia(Hayaannews):Baarlamaanka Ethiopia ayaa Sabtida maanta ah ansixiyay dhismaha dowlad kumeel gaar ah oo loo sameeyo gobolka Tigray, sida ay ku warrameyso warbaahinta Fana oo taabacsan dowladda.
Baarlamaanka ayaa fadhigan degdega ah sidoo kale ku kala diray dowlad goboleedkii maamuleysay gobolka waqooyiga ee Tigray.
Khilaaf cakiran oo soo kala dhex galay xukuumada federaalka ee Ra’iisul wasaare Abiy Axmed iyo xulufadiisii hore ee Tigreega ayaa qarxay Arbacadii kadib markii Abiy uu amar ku bixiyay olole militari oo ka dhan maamulka Tigray. Waxa uu ku eedeeyey ciidabja jabhadda xoreynta shacabka Tigray (TPLF) in ay weerareen saldhig milatari oo federaal ah ayna isku dayeen in ay qalab militari xadaan.
Dhanka kale, Sudan ayaa qeyb ahaan xirtay xadka ay la wadaagto Ethiopia, sida ay maanta oo Sabti ah ku warrantay wakaaladda wararka dalkaasi ee SUNA, tani oo la xiriirta rabshadaha sii kordhaya ee gobolka.